अधिक प्रयोगकर्ता भ्रमणहरू प्राप्त गर्न सही सामग्री कुञ्जीशब्दहरू कसरी छनौट गर्ने?
तपाईंको वेबसाइट भ्रमणका लागि सही किबोर्डहरू चयन गर्नाले थप प्रयोगकर्ता भ्रमणहरू प्राप्त गर्न प्रयास गर्नेछ. त्यो एक समय-उपभोग कार्य पनि हुनेछ. तर सबै प्रयत्नहरू पूर्ण रूपमा उपयुक्त सामग्री खोजहरूमा लगानीमा ठूलो फिर्ती प्रदान गरिनेछ. सबै पछि, धेरै काम गर्नमा कुनै अर्थ छैन र अन्ततः ठूलो सामाग्री सिर्जना गर्न धेरै पैसा तिर्नु पर्ने छ, जुन खोज नतीजाहरूको सूचीमा Google को प्रयोगकर्ताहरु को लागी शायद देखिने देखिने देखिन्छ। - cursos de fotografia bogota.
यदि तपाईं खोजी इन्जिन अनुकूलन र सामाग्री कुञ्जी शब्दहरूसँग समुद्रमा भर्खरै हराउनुहुन्छ भने, म यहाँ छु तपाईलाई सही छनौट गर्न मद्दत गर्न र उत्कृष्ट सामग्री कुञ्जी शब्दहरू छन्।. त्यसोभए, कसरी एक निर्दोष वेब पृष्ठ सामग्री सिर्जना गर्न पत्ता लगाउनुहोस्. हाम्रो प्राथमिक लक्ष्यको रूपमा तपाईंको लक्ष्य दर्शकहरू उत्साहसँग पढ्न तयार बनाउन, के यो हो? र Google को जस्तै खोजी इन्जिन, यसलाई पनि मनपर्छ!
दाहिने सामग्री र प्रासंगिक खोजशब्द
केहि अरू गर्नु अघि,. एक कीवर्ड एक गंभीर रूप देखि महत्वपूर्ण शब्द हो जुन ब्राउज गरेर मान्छे को खोज को अनुरोध को अन्तिम लक्ष्य पूरा गर्न को लागी. ठीक छ. तर तपाईको वेबसाइटको लागि सही सामग्री किबोर्डहरू छनौट गर्ने र अझ ट्राफिकको आनन्द उठाउने उत्तम तरिका के हो?
म एक कदम फिर्ता गर्न सुझाव दिन्छु. तपाईंको संभावित ग्राहकहरूको दृष्टिकोणबाट सामग्री किबोर्डहरू चयन गर्ने सही प्रक्रियालाई हेर्नुहोस्. सबै पछि, तिनीहरू ती कुञ्जी शब्दहरू र कुञ्जी वाक्यांशहरूको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने उद्देश्य हुन्. यो धेरै सरल तर राम्रो तरिकाले काम गर्ने धारणा पछ्याउदा, कार्यलाई पूर्ण सुरुवातबाट सही गर्न को लागी मुख्य तरीकाहरू हेर्नुहोस्:
तपाईंको लक्ष्य श्रोतालाई सोध्नुहोस्
केवल तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूसँग कुरा गर्नुहोस्, उदाहरणका लागि सामाजिक प्लेटफार्महरू, ब्लग विवादहरू, वा वेबमा विषय छलफलहरू. व्यक्तिहरूलाई सोध्नुहोस् जुन तिनीहरू सामान्यतया तपाइँका उत्पादनहरूमा बनाइएका छन्. आश्चर्य छ कि तिनीहरू प्राय: ती उत्पादनहरू वा सेवाहरू संग काम गरिरहेका छन् जुन कल गर्दै छन्. मानिसहरु खोज अनुरोध गर्न को लागी शब्दावली मा केहि वास्तविक जीवन विशिष्टता संग आश्चर्यचकित हुन सक्छ. अन्त्यमा, हेर्ने प्रयास गर्नुहोस् कि कुन लामो-पछाडि वाक्यांशहरू तपाईंको उत्पादन वा सेवाहरूमा उल्लिखित अनुरोध क्वेरीका लागि प्रयोग गरिने सम्भव छ.
सोशल मिडियामा खोज राख्नुहोस्
आजकल, सोशल मिडियाको दायराले उनीहरूको आवश्यकता हुन सक्ने सबै भन्दा बढीका लागि अनलाइन खोजीहरू गरेर मानिसहरुसँग भीड़िएको छ।. र त्यहाँ त्यहाँ तपाईंको धेरै छलफल, समीक्षा, ट्यूटोरियल र अन्य उपयोगी चीजहरू छन्. केवल केहि सामाजिक लिङ्कहरू जस्तै चहचहाना, वा फेसबुकमा जानुहोस्, सजिलै हेर्न सक्नु हुने के वास्तविक व्यक्तिहरू के हो र कुन सामग्री कुञ्जीपाटी तिनीहरूले प्रयोग गर्दै छन् तपाईंको रुचिका विषयहरू सन्दर्भमा।. र तपाईंको स्थानमा सबैभन्दा प्रचलित शीर्षकहरू जाँच गर्न निश्चित गर्नुहोस्, त्यो उपयोगी हुनेछ.
सामग्री खोजशब्द अनुसन्धानको लागि उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्
अरू कुनै पनि भन्दा अघि, तपाईं केवल Google स्वत: पूर्ण खोज फारम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।. मेरो मतलब तपाईले खोज इन्जिन द्वारा प्रदान गरिएको सबैभन्दा लोकप्रिय सुझावहरू हेर्न टाइप सुरु गर्नु पर्छ, प्रत्यक्ष व्यक्ति अनुरोधहरूको अनुसार. तपाईं GooglTrends डाटाबेस प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं राम्रो सामग्री को सही सामग्री कुञ्जी शब्दहरू छनौट गर्नको लागि अत्यन्त उपयोगी मदत दिन सक्नुहुन्छ. सबै पछि, म Wordtracker को लागि आवेदन को सिफारिस गर्दछु. मलाई विश्वास छ कि यो हाम्रो उद्देश्यको लागि उत्तम उपकरण हो, जुन तपाईंलाई उपयोगी डेटाको राम्रो सेट देखाउन सक्छ जस्तै वर्तमान प्रतिस्पर्धा, खोज भोल्युम, तपाईंको इलाकालाई विचार गर्नुहोस् र धेरै धेरै.